Auto eNgcingo Ukuzibophelela
Zhejiang Feileisi Electrical Technology Co., Ltd. lasekwa ngo-2008, i umenzi ngobuchule baphinde izithuthi, flashers, itshintshela, abenzi boluvo, DC lwekontraka, kweentambo nezikrweqe kunye nezinye iimveliso zombane jikelele.
Le nkampani wadlula ISO / TS16949: kwezatifiketi inkqubo 2009 umgangatho ngo-2015 Iimveliso badlula ukuwahlola iziko iindawo oluzenzekelayo uvavanyo Ningbo, wavuka SGS-ROHS isatifikethi, Union European CE ukuqiniszekiswa kunye izicelo ezininzi patents imveliso.
"FOOCLES" brand Le nkampani, "FEILEISI" iimveliso lophawu, bathandwayo umgangatho walo ezinzileyo kunye nendleko-olusebenzayo ezigqwesileyo emarikeni. Athunyelwa eYurophu, eMelika, kuMbindi Mpuma, mpuma Asia kunye nezinye iindawo zehlabathi. Ngenxa yemigudu wenkuthalo bonke abasebenzi, i "FOOCLES" Brand yi kakuhle yaziwa kwi Automotive zombane kushishino inyathelo emva kwelinye.
Ngokufudumeleyo abahlobo ezivela kulo lonke ihlabathi ukuza kusityelela inkampani yethu, thethana ishishini, ukomeleza intsebenziswano zobugcisa, siya kukuvuyela ukuze ndilungiselele nina.
kunye nemithetho nokuhlolwa, ukumakisha, ukupakisha, ukugcinwa kunye nokugcinwa baphinde injongo jikelele iimoto. Lo mgangatho usebenza kwi DC yesekethe zoqhagamshelwano ngoomatshini baphinde izithuthi kagesi (kubandakanywa Plug-in smal ...
E-Idilesi Zhejiang FEILEISI TECHNOLOGY YOMBANE CO., LTD.
Ifowuni: + 86-577-61755310